Nyowani Yemazuva Ano Contemporary (Moco) Museum yakavhurwa muBarcelona
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Nyowani Yemazuva Ano Contemporary (Moco) Museum yakavhurwa muBarcelona
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Entertainment • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Moco Museum inotora nzvimbo yaPalacio Cervelló, yaimbova pekugara yega yemhuri inokudzwa yeCervello kusvika muzana ramakore rechi18.
Iyo Yemazuva Ano Contemporary (Moco) Museum inodzokorora yayo inosanganisira mamodheru modhi muBarcelona, ​​Spain.
Ichitevera kubudirira kwayo muAmsterdam, Moco inoratidzira kuzvipira kwayo kuratidza mabasa emifananidzo nevanyori vane mukurumbira pasi rese uye nyeredzi dzinokwira.
Moco Museum ichavhura magonhi ayo musi wa16 Gumiguru 2021 mune 16th Muzana ramakore Muzinda mukati meguta.
The Yemazuva Ano Contemporary (Moco) Museum inodzokorora yayo inosanganisika mamodheru modhi muBarcelona, ​​Spain. Musi wa16 Gumiguru 2021, Moco Museum Barcelona inovhura magonhi ayo kuruzhinji, ichimaka chitsauko chitsva chemuseum yakazvimirira.
Yemazuva ano & Yemazuva Ano Art
Kutevera kubudirira kwayo mu Amsterdam, Moco anonongedzera kuzvipira kwake pakuratidzira mabasa emifananidzo nemaartist ane mukurumbira pasi rese uye nyeredzi dzinokwira. Moco Amsterdam yakatanga kuvhura mikova yayo muna Kubvumbi 2016. Nhasi, Moco Museum Amsterdam yakagamuchira vangangoita mamirioni maviri vashanyi vanobva kunopfuura zana nemakumi matanhatu emarudzi. Kune vashanyi vazhinji, Moco ndiyo nzvimbo yekupinda munyika yeunyanzvi. Isu tinodada kugamuchira vateereri vadiki vadiki vanotishanyira uye vobva vadanana nehunyanzvi kekutanga nguva.
Moco Barcelona ane mifananidzo kubva kuna Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Salvador Dalí, Damien Hirst, Keith Haring, KAWS, Hayden Kays, Yayoi Kusama, David LaChapelle, Takashi Murakami, & More! Dhijitari inosangana neunyanzvi hwekunyudza kubva kuchikwataLab, Les Fantômes, uye Studio Irma.
Esplendor de la Noche by Guillermo Lorca: Moco anopa yekutanga European solo show kubva kune ano chiChilean Artist mune show inosanganisa mashiripiti uye kwechokwadi. Yakarongedzwa naSimon de Pury, mushambadzi ane mukurumbira, mutengesi wehunyanzvi uye mumwe weanotungamira manhamba muunyanzvi hwenyika.
TeamLab: Dhijitari Inonyudza Unyanzvi
YeEuropean yekutanga yakatsaurirwa nzvimbo yekuratidzira kuNFT chiitiko.
Inowanikwa pa c / Montcada 25 muBarcelona. Moco Museum inotora nzvimbo yaPalacio Cervelló, yaimbova pekugara yega yemhuri inokudzwa yeCervello kusvika muzana ramakore rechi18. Kubva kuMiddle Ages kusvika kune makumi mavirith Zana ramakore, vanokudzwa, vatengesi, uye mhuri dzehumambo dzakabatisisa ino saiti yenhoroondo. Nekuremekedza kukuru kweichi chivakwa chiripo, Studio Pulsen akawanazve iko kwekutanga kwePalacio Cervelló - kuchinjira kune izvo zvido zveMoco Museum kugadzira nzvimbo huru yemazuva ano neyazvino.
Iyi nzvimbo inotora inoratidza yekutanga kwaMoco, payakatora nzvimbo yeVilla Alsberg (b. 1904) muAmsterdam - chivakwa chakagara chakachengeterwa vanhu vane mukana. Zvakare, Moco Museum inoshandura simba renzvimbo yakasarudzika yekutambira vese. Nekudaro, Amsterdam yakave diki kwazvo kuti iratidze zvese zvedu zviroto zvakanyanya, uye yedu yekuratidzira nzvimbo ishoma. Kune humwe hunyanzvi hwakawanda hwatinoda kugovera uye nedzimwe nyaya dzakawanda dzekutaura.